VAKY BANTSILANA : Tsy mitsaha-mitotongana ny fiainam-bahoaka… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Tsy mitsaha-mitotongana ny fiainam-bahoaka…
Vao nanomboka ity taona 2017 ity, efa notsenain’ny fiakaran’ny vidin-tsolika ny valalabemandry. Mandrahona hatrany ny avy eo anivon’ny UCTU, ohatra, ny amin’ny fampiakarana ny saran-dalana. Azo antoka fa tsy maintsy hampiaka-peo ny mety ho fampiakarana izany izy ireo amin’ity herinandro ity, vokatry ny tsy fahafehezan’ny mpitondra ny vidin-tsolika. Na nahazo mpitantana vaovao aza, ny eo anivon’ny Jirama, efa nampiomana mialoha ny mety ho fampikarana vidiny, izay mody sarontsaromana amin’ny hoe : tery omby ririnina ka hanao izay tsy hahafatiantoka ny reniny no tsy hahabotry ny zanany. Na inona anefa filaza, ny vahoaka no tsy maintsy ho botry amin’ny fampiakarana ny faktiora…
Tsy hita be ihany izay heverina fa tena ahombiazan’ny fitondrana amin’ny fanatanterahana ny asany. Ambentin-tenin’izy ireo ny hoe efa manomboka mipaka eny ifotony ny fampandrosoana. Tena misitraka ny fampandrosoana lazain’izy ireo tokoa ve ny vahoaka? Raha ny fahitana azy aty ivelany, mitohy hatrany ny fampandriana adrisa sy ny ronono an-tavy. Nolazain’ny Filoha tamin’iny herinandro iny fa mifototra amin’ny kolontsaina malagasy ny fampandrosoana. Mba firy isan-jato amin’ny tetibolam-panjakana moa no natokana amin’ny kolontsaina raha heverina fa izany no fototry ny fampandrosoana? Sao miantsambotsambotra tahaka ny vary kely an-daona, leiretsy, ny resaka tian-kitodiana.
Tsy kolontsaintsika, hoy izy, ny mifamono…ny manao fitsaram-bahoaka, saingy izany no iainantsika amin’izao fotoana izao. Very hasina tanteraka ny fitsimbinana ny aina, raha ireo notanisainy ireo. Mby aiza anefa ny tena fitsinjovan’ny mpitondra ny ain’ny vahoaka malagasy, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fiakaran’ny vidim-bary, izay fototry ny sakafon’ny Malagasy. Tena aina ho an’ny Malagasy io, kanefa tsy voatsimbina. Tsy vitan’ny resaka mihevotrevotra fotsiny fa mitaky fandraisana andraikitr’ireo heverina fa tomponandraikitra voalohany. Miantraika hatrany anatin’ny ativilanin’ny vahoaka ny fampahantrana lalina tsy andraisana fanapahan-kevitra.
Tsy mitsaha-mitotongana ny fiain’ny vahoaka ka tonga hatrany amin’ny fifamonoana sy ny fitsaram-bahoaka. Na ireo heverina ho tomponandraikitra amin’ny fandriampahalemana aza, sifotra nalan-doha, momba ny resaka fitsaram-bahoaka. Mampanontany tena izany rehetra izany, sao tsinay kely manamaimbo ny atiny ny tsy fahaiza-manao, ny tsy fiheveran-tena ho tomponandraikitra fa tompon-toerana fotsiny? Toa arakaraka ny tsy fisian’ny sakana avy amin’ny mpanohitra, no toa vao mainka mampivaralila ny fiainam-bahoaka. Inona no laharam-pahamehan’ny mpitondra raha atao ambany maso tsy hita hatrany ny tena maharary amin’ny valalabemandry tsy mety tafafoha? Ilam-pandinihina izany satria ny fahanginan’ny vahoaka, tsy midika faharesena … fandresena miandry fotoana.